Ungabagcina Kanjani Abasebenzisi Bakho Bajabule Lapho Ukhulula Isibuyekezo Esikhulu Kusicelo Sakho | Martech Zone
NgoMgqibelo, Juni 10, 2017 UJeff Kerr
Kukhona ukungezwani okungokwemvelo ekuthuthukisweni komkhiqizo phakathi kokuthuthuka nokuzinza. Ngakolunye uhlangothi, abasebenzisi balindele izici ezintsha, ukusebenza futhi mhlawumbe nokubukeka okusha; ngakolunye uhlangothi, izinguquko zingabuyela emuva lapho izixhumi ezijwayelekile zanyamalala ngokuzumayo. Lokhu kushuba okukhulu kakhulu lapho umkhiqizo ushintshwa ngendlela emangalisayo - kangangokuthi ungaze ubizwe ngomkhiqizo omusha.
At I-CaseFleet ezinye zalezi zifundo sazifunda kabuhlungu, yize kwase kusekuncane kakhulu ekukhuleni kwethu. Ekuqaleni, ukuzulazula kohlelo lwethu lokusebenza bekutholakala ngokulandelana kwezithonjana ngaphezulu kwekhasi:
Ngaphandle kokubaluleka kobuhle kwalokhu kukhetha, sizizwe sibophezelekile ngenani lesikhala esitholakalayo, ikakhulukazi lapho abasebenzisi bethu bebuka uhlelo lokusebenza ezikrinini ezincane noma kumadivayisi eselula. Ngolunye usuku, omunye wabathuthukisi bethu wafika ukuzosebenza ngoMsombuluko ekuseni nezithelo zeprojekthi engamenyezelwanga yangempelasonto: ubufakazi bomqondo wokuguqulwa kwesakhiwo. Ingqikithi yenguquko ehambisa ukuzulazula kusuka emgqeni ngaphezulu kwesikrini kuya kukholamu ngakwesobunxele:
Ithimba lethu belicabanga ukuthi umklamo ubukeka umuhle futhi, ngemuva kokungeza ukuthinta okumbalwa, sawukhipha kubasebenzisi bethu kulelo sonto silindele ukuthi bazojabula. Sasinephutha.
Ngenkathi idlanzana labasebenzisi lilwamukela ngokushesha lolu shintsho, inani elikhulu alizange lijabule nakancane futhi labika ukuthi linobunzima bokuhambisa uhlelo. Isikhalazo sabo esikhulu, kepha, bekungekhona ukuthi abathandanga ukwakheka okusha kepha kubabambe bengazelele.
Izifundo Ozifundile: Shintsha Kwenziwe Kwesokudla
Ngokuzayo lapho siguqula isicelo sethu, sisebenzise inqubo ehluke kakhulu. Ukuqonda kwethu okuyinhloko ukuthi abasebenzisi bathanda ukulawula ikusasa labo. Lapho bekhokhela isicelo sakho, benza kanjalo ngesizathu, futhi abafuni ukuthi izinto zabo eziyigugu zisuswe kubo.
Ngemuva kokuphothula isikhombimsebenzisi sethu esisha esenziwe kabusha, asizange simane sisikhiphe. Esikhundleni salokho, sabhala okuthunyelwe kwebhulogi ngakho futhi sabelana ngezithombe-skrini nabasebenzisi bethu.
Okulandelayo, sengeze inkinobho esikrinini sokwamukela kuhlelo lwethu olunesihloko esikhulu, enye ikhophi ebhalwe ngokucophelela nenkinobho enkulu ewolintshi eyamukela abasebenzisi ukuzama inguqulo entsha. Siphinde sazi ukuthi bangabuyela enguqulweni yoqobo uma befuna (isikhashana noma kunjalo).
Lapho abasebenzisi bekule nguqulo entsha, izinyathelo ezidingekayo zokubuyela emuva zazitholakala ngokuchofoza okuningana kuzilungiselelo zephrofayili yomsebenzisi. Besingafuni ukufihla inkinobho ukuze sibuyisele emuva, kepha futhi besingacabangi ukuthi kuzoba wusizo ukuthi abantu baphendukele emuva naphambili, okungenzeka ukuthi bekuyenga uma inkinobho ibivele ngokushesha. Eqinisweni, umsebenzisi oyedwa kuphela obuyiselwe emuva phakathi nenkathi yokungena yenyanga yonke. Ngaphezu kwalokho, ngenkathi sifaka iswishi futhi senza ukuthi inguqulo entsha ibe yimpoqo cishe bonke abasebenzisi bethu abasebenze kakhulu sebeshintshile futhi basinika impendulo enhle ngenguqulo entsha.
Ngokungeziwe kuzikhuthazo ezingaphakathi nohlelo esizinikezile zokushintsha, sithumele ama-imeyili amaningi sazisa abasebenzisi ukuthi inguquko enguqulweni entsha izokwenziwa unomphela nini. Akekho obanjwe engazelele futhi akekho okhonondile. Eqinisweni, abasebenzisi abaningi bakujabulele kakhulu ukubukeka okusha.
Noma kunjalo, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ukukhipha isibuyekezo ngale ndlela akuyona mahhala. Ithimba lakho lokuthuthuka kuzodingeka ligcine izinhlobo ezimbili ezihlukene ze-codebase efanayo futhi kuzodingeka futhi uxazulule izinkinga eziyinkimbinkimbi ezimalunga nokuthi izinguqulo zithunyelwa kanjani kubasebenzisi bokugcina. Amathimba akho okuthuthukisa nokuqinisekisa ikhwalithi azobe esekhathele ukuphela kwenqubo, kepha mhlawumbe uzovuma ukuthi ukutshalwa kwesikhathi nesikhathi nezinsizakusebenza bekungukuhlakanipha. Ezimakethe zesoftware ezincintisana kakhulu, kufanele ugcine abasebenzisi bejabule futhi ayikho indlela esheshayo yokubenza bangajabuli kunokushintsha ngokungazelelwe isikhombimsebenzisi sakho.
Tags: uhlelo lokusebenzaicalaukwaneliseka kwamakhasimendeukukhishwa okushaplatform
UJeff uyi-CEO futhi ungumsunguli we I-CaseFleet. I-CaseFleet iyisoftware yokuphathwa kwamacala enika amandla abamelene namacala ukuthi banqobe ngokwengeziwe, ngamathuluzi okwenza imigqa yezikhathi, ukwenza ikhalenda yezomthetho, ukukhokhisa nokuningi.
UJun 14, 2017 ngo-7: 54 AM
Ngokuvamile, lapho sibuyekeza uhlelo olusha siqinisekisa ukuthi okudala kusesekumodini esebenzayo kuze kube yilapho abantu beyithuthukisela enguqulweni entsha. Noma yikuphi okuhlangenwe nakho okubi kuzophoqa umsebenzisi ukuthi akhethe ukuphuma kumasevisi akho. Kubaluleke kakhulu ukuthi ibhizinisi libe nalesosimo sokwazisa ngaphambi kokuqalisa uhlelo lokusebenza olusha.
Ngaphezu kwalokho, cela abantu ukuthi banikeze impendulo. Ukwethulwa okusha yisikhathi lapho abantu bethanda ukwabelana ngemicabango yabo mayelana nohlelo lokusebenza. Uma benokuthile okusha engqondweni bazokwabelana nawe. Izokwenzela unjiniyela wakho ithuba elisha lokwengeza leso sici esiphakamiswa ngabantu.
Aug 15, 2017 ku-5: 47 AM
Lapho sithumela ama-imeyili kumakhasimende ethu maqondana nezinguquko ezinkulu kuwebhusayithi. Sibagcina bengena nakwiwebhusayithi yakudala uma befuna. Kubenza babe ntofontofo ngenkathi bayibhekabheka. Futhi, omunye umsebenzisi angahle angayithandi idizayini yakho entsha ukuze lolu hlobo lwabasebenzisi lusheshe luguqulele kwinguqulo endala kalula.